BIGOT minister Aung Min should be removed from office and investigated by the UN led International Investigators | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« In Myanmar,3Digits Instill Fear: ‘969’ Movement Led by Buddhist Monks
Hands up! Surrender! Myanmar Muslims including girls and children were ordered »
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆-၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့က မြမန္တလာဟိုတယ်မှာ ပြည်ထောစင်ုဝန်ကြီး ဦးအောမင်င်းနဲ့ ပြည်ထောစင်ု ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့တုန်းကအပြန် အလှန်ပြောဆိုဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကိုပါ။ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကို ကျွန်တော်က ယေန့မြန်မာနိုင် ငံထဲမှာပြန့်ပွားနေတဲ့ (Hate Speach) တွေကို တားမြစ် ပေးဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံစကားတွေ -စွတ်စွဲချက်တွေနဲ့ အမုန်းတရားတွေဟောပြော ဖြန့်ဝေနတာတွေ ကို နိုငင်ံတော်အစိုးရက တားဆီးပေးသင့်ပါတယ်-နိုငင်ံတော် မဟာသံဃနာယကဆရာတော်ကြီးများကိုလဲ ဒီဟောပြောချက် တွေကို ဟန့်တားပေးပါမည့် အေကြာင်း လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်-လို့ပြောလိုက်တော့။ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းရဲ့အေဖြက ကျွန်တော့်ကို တော်တော်အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းအေဖြေပးခဲ့တာက “ဟုတ်တယ်-မွတ်စလနင်ိုငင်ံတွေက-ကျွန်တော်တို့ကို-ပရ်ရကှာတွေ- တော်တော်ပေးတယ်-မြန်မာနိုငင်ံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့-ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်-ဆူးလေ ဘုရားနားကိုလာကြ ည့်ပါ-ဘုရားရယ်-ဗလီရယ်-ချခ်ျရယ်-ဘာသာစုံ-တစ်နေရာထဲမှာ-အေးအေးချမ်းချမ်းနေနှိုင်တာ-ဘယ် နိုငင်ံမှာရှိလဲ-ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုငင်ံမှာပဲ ဒါမျိုးရှိတယ်-ခဗင်ျားတို့နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်ဘုရားလာတည်မယ်-ရမလား-လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်” တဲ့ဗျား။ ကျွန်တော်တင်ပြတာကတခြား-သူဖြေတာကတလွဲ။ ကျွန်တော် တော်တော်စိတ်ပျက်သွားမိတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဝန်ကြီးကိုပြန်လ်ရညှင်းလင်းတင် ပြမိတယ်။ “ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းခဗင်ျား-ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအဓိပ္မါယ်ကို-ဝန်ကြီးသေဘာမေပါက်ဘူးထပင်ါတယ်- ကျွန်တော်ပ်ြရနှင်းပြပါရေစ—-ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုငင်ံထဲမှာ-အစ္စလာမ်ဘာသာကို ဆန့်ကျတင်ဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရော-ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာပါပြန့်နှံ့နေပြီး တရားပွဲတွေမှာ ဟောပြောနေတာတွလဲ တွေ့နေရပါတယ် ”-ဆိုတော့ ဝန်ကြီးက “မရှိပါဘူး ” တဲ့ဗျာ-ကျွန်တော်က“ဟာ-ဝန်ကြီးရယ်-ရှိပါတယ်ခဗင်ျာ-လူသိရှင်ကြားပါ-ဂျာနယ်တွေထဲမှာပါပါတယ်-ကရင်ပြည်နယ်မှာ- မွန်ပြည်နယ်မှာ-တာချီလိတ်မှာ-ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နေရာအနှံ့ ထထင်ရင်ှားရှားဖြစ်နေတာပါ-ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်မှာ- တရားပွဲတွေလုပ်ြ ပီးဟောပြောနေသလို-မန္တလေးမှာလဲ မြို့အနှံ့ မွတ်စလမ်ဆင်န့်ကျင်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွ ဝေနပါတယ်” ဆိုတော့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက လက်ခံလိုပုံမရေပမဲ့ ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းက “ဟုတ်ပါတယ်-ဖြစ်နေပါတယ် ”-လို့ လှမ်းပြော လိုက်တော့မှ မငြင်းတော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်က ဆက်ပြီးတော့- “ ဒီကိစ္စတွေကို-သက်ဆိုရင်ာတာဝ်ရနှိသူများကေန တားဆီးပေးစေချင် ပါတယ်- ဒီစာရွက်တွေဝေတာ-တရားတွေဟောတာဟာ- ကျွန်တော်တို့အတွင်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး- ကျွန်တော်တို့ အေရထူနေပါ ပြီ -ကျွန်တော်တို့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေ-လူထုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်-ဒါပေမဲ့-ဒီဟောပြော ချက်တွေ- ကြော်ငြာချက်တွေဟာ-မြန်မာပြည်ထဲတင်ပြန့်တာမဟုတ်ပါဘူး-နိုငင့်တကာမီဒီယာတွေကတဆင့်-အင်္ဂလိပ်ဘာ သာပြန်ပြီး-တကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နေပါတယ်-ဒီလို တကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်တော့-မွတ်စလင်မ်နိုငင်ံတွေက မြန်မာနိုငင်ံအေပ်ါဖိအား ပေး-ဒီလိုဖိအားပေးတော့-မင်းတို့မွတ်စလမ်နင်ိုင် ငံတွေက တို့နိုငင်ံကိုဖိအားပေးတယ်ဆိုပြီး-ကျွန်တ်ာတို့ မွတ်စလမင်တွေ ကိုပဲအပြစ်မြင်-ဖ်ြရစလို့ပါ-မြန်မာနိုငင်ံရဲ့ နိုငင်ံတကာ ပုံရိပ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စမို့ပါ” —လို့ရှင်းပြေတာင်းဆိုခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း-ဝန်ကြီးများဘက်ေကန တတ်နိုသင်မျှ တာီးး ဟန့်တားပေးပါ့မယ်-ဆိုတဲ့ အေဖြ-မရခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ ကိစ္စတွေဟာ-လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာခေတ်ရောက်လာလို့ပဲ ဖ်ြရစသေယာင်ယောင်-ဒါတွေကို တားဆီးလိုရကပင်ဲ-မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးသွားမှာ ဖြစ်ေသယာင်ယောင် ပြောကြားသွားခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့က Hate Speach တွေပြောရင်- ခဗင်ျားတို့က Love Speach တွေများများပြောပေါ့ဗျာ-ခဗင်ျားတို့ ပြောခွင့်ရဘို့- ဝန်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ကိုလည်း တင်ပြေပးပါ့မယ်- ဆိုတာလောက်ပဲ -အေဖြရခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် -ဆိုတာထဲမှာ-ဖွဲ့စည်းပုံအေခြခံဥပေဒကို ထိပါးဆန့်ကျင်ပြောဆိုလို့ မရပါဘူး။ အခုလို ဘာသာရားတခုခုကို မုန်းတီးလာအောင်-မဟုတ်မမှန် စွတ်စွဲပြောဆို ရေးသား ဟောပြောမှုတွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပေဒကို ဆန့်ကျင်နေတာ အထအင်ရှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ တာဝ်ရနှိသူအစိုးရအေနနဲ့ မဖြစ်ေမန ဟန့်တား အေရးယူရမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပြေတာင်းဆိုတဲ့အထဲမှာ-အေရးယူဖို့ မပါပါဘူး-ဒါပေမဲ့ ဝန်ကြီးမင်းများ-ဘာမှလုပ်ေမပးခဲ့ ပါဘူး။ လုပ်ပေးပါ့မယ်-လို့လဲ ကတိမေပးခဲ့ပါဘူး။
Tags: Aung Min, Burma, Facebook, Meiktila, Muslim, Rakhine State, Thein Sein, United Nations
This entry was posted on April 11, 2013 at 5:20 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.